संगीता दाहाल - | Nagarik News - Nepal Republic Media
संगीता दाहालका लेखहरु :
आकस्मिक र अप्रत्याशित घटना प्रभावित जीवन
बि.पी. कोइरालालाई आकस्मिक र अप्रत्याशित घटनाद्वारा प्रभावित विराट राजनीतिक व्यक्तित्व हो भन्न हिच्किचाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन।
संगीता दाहाल २४ भाद्र २०७७ बुधबार ५ मिनेट पाठ
युवा चित्तको सम्मान
युवाको सामाजिक मनोभावलाई दुत्कार होइन, उनीहरूमा ब्युँझेको चेतको सम्मान गर्नु हितकर हुन्छ।
संगीता दाहाल २९ श्रावण २०७७ बिहीबार ५ मिनेट पाठ
संगीता दाहाल ७ श्रावण २०७७ बुधबार ६ मिनेट पाठ
विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु-याएका ज्ञात/अज्ञात नेपाली महिलाको इतिहास उत्खननले उनीहरूप्रति आदर/सम्मान त हुन्छ नै, साथै अहिलेको पुस्ताले प्रेरणा पनि पाउँछ।
संगीता दाहाल २५ फाल्गुन २०७६ आइतबार १२ मिनेट पाठ
दिल्ली चुनावको सन्देश
ठूला र चामत्कारिक काम नगरे पनि जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सानातिना काम गरेर पनि जनताको मत जित्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा आपको जितले दिएको छ।
संगीता दाहाल ७ फाल्गुन २०७६ बुधबार ६ मिनेट पाठ
बिपीको धार्मिक (अ)विश्वास
“त्यतिबेला शैलजा बाबा अवधूतरामबाट मन्त्रणा लिएर उनकी भक्त र चेली भइसकेकी थिइन् । उनले बाबाको विभूति लगाउँथिन् ।
संगीता दाहाल २४ भाद्र २०७५ आइतबार १४ मिनेट पाठ
स्मृतिमा शैलजा अाचार्य
आफ्नै सुर, धुन, लय र तालका तीनजना महिला शैलजा आचार्य, उर्मिला उपाध्याय गर्ग र भद्र घलेको सम्बन्धमा ६० को दशकको प्रारम्भमा एकराष्ट्रिय दैनिकमा मेरो लेख प्रकाशित भएको थियो। एउटा लेखको शीर्षक थियो,‘याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी र शैलजा’ अर्को लेखको भने सम्झना भएन। तर प्रसङ्ग थियो, उल्लिखित महिलाको । उनीहरू तीनैजनालाई कहीँकतै भेटेको र कुराकानी भएको थिएन। सार्वजनिक जानकारीमा जे जति थाहा पाएको थिएँ, त्यसैको आधारमा लेखेको थिएँ।
संगीता दाहाल २९ जेष्ठ २०७५ मंगलबार १० मिनेट पाठ
जनता जनार्दनको फैसला
स्थानीय निर्वाचनमा खस्केको नेपाली कांग्रेसको शाखलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले अझ घटायो । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेस यथास्थानमा रहन सकेन, खुम्चिन पुग्यो । निर्वाचनमा भाग लिने सबैको विजय हुने होइन । एउटाले जित्ने अरूले हार्ने नै हुन्छ ।
संगीता दाहाल ६ पुस २०७४ बिहीबार १५ मिनेट पाठ
कान्छीको सपनाको प्रारूप
घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरू पूरा भएको वा नभएको खबरदारी र दबाब दिने मतदाताको कुनै हैसियत हुँदैन । यो यथार्थलाई आत्मसात् गरेर मतदाताले हाम्रो होइन, राम्रो उम्मेदवारलाई मतदान गरेमा जनतामा रहेको सार्वभौमिक अधिकारको अर्थ हुन्छ । त्यसमा पनि नेपाली जनता अत्यन्त सजिला छन् । सरल छन् । कुनै गुनासो पनि गरिराख्दैनन् ! क्षमाशील छन् ।
संगीता दाहाल १९ मंसिर २०७४ मंगलबार १४ मिनेट पाठ
मंसिर १० र २१ गते हुने भनिएको पहिलो र दोस्रो प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अत्यन्त न्यून मात्रामा महिला उम्मेदवार तोकिएपछि सामाजिक बहस सुरु भएको छ । ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताका लागि कानुनी सुनिश्चितता भए पनि व्यवहारमा किन प्रकट भएन ?
संगीता दाहाल २७ कार्तिक २०७४ सोमबार १२ मिनेट पाठ
संगीता दाहालका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्